Monday October 18, 2021 - 18:10:45
Warar dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay qarax xooggan oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka Laamu oo ka mid ah dhulalka muslimiinta balse ay xoogga ku haystaan kenya.
Qaraxa oo ahaa nooca miinada dhulka lagu aaso waxay ciidamada xarakada shabaabul Mujaahidiin inta u dhaxaysa deegaannada Kayunga iyo Sankura kula eegteen kolonyo ciidamo Kenyaan ah waxaana qaraxaas ku le’day askar badan oo Kenyaan ah.
Ilo wareedyo muhiim ah waxay xaqiijiyeen in qaraxa oo si gaar ah u haleelay ciidamo Kenyaan ah oo hareer socday gaadiidka kolonyada uu galaaftay nolosha ugu yaraan 15 askari oo Kenyaan ah kuwaas oo ka mid ahaa ciidamadii hareer socday gaadiidka ciidamada.
Qaraxan khasaaraha badan dhaliyay waxa uu daba socday qarax kale oo shalay ciidamada dagaalyahanno jihaadi ah ay ka fuliyeen agagaarka deegaanka Kaambooni oo ka mid ah deegaanada ku teedsan soohdin beenaadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya waxaana qaraxaas lagu dilay 8 askari oo Kenyaan ah.
Wadarta guud ee ciidanka dowladda Kenya looga dilay qaraxyadii ka dhacay Kaambooni iyo gobolka Lamu waxay kor u dhaafeen 23 askari oo Kenyaan ah waxayna howlgalladani qayb ka yihiin howlgllada ka dhanka ah saliibiyiinta Kenya.
Ciidamada millatariga dowladda Kenya ayaa si wayn ugu dhiigbaxaya aagaga dagaalka waana qayb ka mid ah miraha qaraar ee ay ka dhaxleen duullaanka qaawan ee ay kusoo qaadeen wilaayaadka islaamiga ah iyo xasuuqa indha la’aanta ah ee ay kula kacaan shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobollada Jubbooyinka iyo Gedo.illaa iyo hadda wax war ah ah kamasoo bixin wasaaradda difaaca Kenya oo ku saabsan qaraxyadan khasaaraha dhaliyay ee ciidamadeeda lagula eegtay gobollada Lamu iyo Jubbada hoose.